Lionel Messi oo Hotelkiisii Lixaad ka furanaya dalka Spain… (Halkee ayay ku kala yaalaan Hotelladiisa kale?) + SAWIRRO – Gool FM
Haaruun January 24, 2022
(Paris) 24 Jan 2022. Ciyaartoyda kubadda cagtu waxay ka siman yihiin in ay mushaar qaataan, hase yeeshee waxay ku kala duwan yihiin lacagta mushaarka, qaar baa sanadkii 60 milyan qaata, qaarna waxaa u soo xaroota 1 illaa 2 milyan meelahaa, hase yeeshee waxaa la isku dhaafay sida loo maareeyo lacagtaasi.
Qaar baa iyagoo mushaar fiican ka qaata kooxaha ay u dheelaan haddana si aan sax ahayn u maareeya dhaqaalahooda, markii ay ciyaaraha ka fariistaanna waxay dareemaan in ay si xun u isticmaaleen dhaqaalihii soo maray, halka kuwo kalena inta ay ciyaaraha ku jiraan oo ay dhallinyarada yihiin ka faa’iideystaan waqtiga iyo maalkooda isla markaana mashaariic wax soo saar leh ku maal gashadaan hantidooda ay mushaaraadka u helaan.
Qormadan waxaan ku soo qaadanaynaa weeraryahanka kooxda Paris Saint Germain ee waddanka Faransiiska iyo xulka qaranka Argentina, Lionel Messi oo ka mid ah xiddigaha ugu dakhliga badan caalamka oo silsiladda Hoteelladiisa waddanka Spain ku soo kordhiyay Hoteel cusub oo noqonaya midkii lixaad albaabadana loo furi dooon bisha April ee sanadkan.
Hotelkan oo ku biiraya silsiladda Hoteellada Messi ee la magac baxay -MIM Hotels- ayaa noqonaya kii lixaad ee laga furo gudaha Spain, waxaana uu ka kooban yahay 45 qol isagoo dhaca Deportivo de Sotogarande, isla markaana ku jeeda badda Midetereeniyaanka, waxaana Hoteelladan maamusha shirkadda Majestic Group.
Aagga uu Hotelkan cusub ka furtay Messi ayaa waxaa ku yaalla dhismaya Naadiyada ciyaarta Golf-ka ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub, waana deegaan ku wacan dalxiiska, waxaa kaloo ku yaalla aagag lagu qabto tartammada doomaha.
Hoteellada kale ee uu Messi ku leeyahay Spain waxa ay kala yihiin:-
1- MIM Sitges : Hotelkiisii ugu horreeyay ee uu ka furtay magaallada Barcelona 2017-kii, kaas oo ka kooban 77 qol, waxaana uu 20km u jiraa halka uu ka deggan yahay Barcelona.
2- MIM Ibiza : Waa hoteel qurux badan oo ku yaalla jasiiradda loo dalxiiska tago ee Ibiza ee waddanka Spain, waxaana uu leeyahay 52 qol oo jiif ah.
3- MIM Mallorca : Waa Hodheelkii saddexaad ee uu furto ciyaaryahan Lionel Messi, wuxuuna iibsaday sanadkii 2020-kii, waxa uu ku yaallaa magaallada Mallorca, xeebtana wuxuu u jiraa 50 tallaabo, wuxuu ka kooban yahay 98 qol oo si heer sare ah loo qalabeeyay, sidoo kale Hotelku wuxuu leeyahay goobo dhowr ah oo lagu raaxeysto iyo GYM.
4- MIM Bakuweera : Hoteelkan oo isna ku yaalla Magaallada Leyda ayaa waxa uu Messi iibsaday bartamihii sanadkii 2020-kii, qolalkiisuna waa 141 qol.
5- MIM Andoorra : waa mid ka mid ah Hoteellada ugu qurxoon ee uu Messi iibsaday, waana Hoteel saaran dhulka buuraha ah ee Andoorra, wuxuuna ka iibsaday qoyskii lahaan jiray muddo 51 sanadood ah, waa hoteel kuwa raaxada ah oo leh 31 qol oo nuuca special-ka ama khaaska ah.
Dhanka kale Messi oo keliya ma ahan ciyaaryahanka ganacsiga geliyay dhanka Hoteellada ee waxaa sidoo kale silsilad Hoteello ah oo la magac baxay Pestana CR7 maalgashaday xidigga ay dhanka kubadda dahabka ah ku loollamaan Messi ee Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Manchester United, waxaana faracyada Hoteellada Ronaldo ay ku kala yaallaan Madrid, Lisbon, Madeera iyo New York.